🥇 Ukuphathwa kwe-salon
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 623
Ividiyo yokuphathwa kwe-salon
Oda ukuphathwa kwe-salon
Ukuphathwa kwe-salon yobuhle kungenye yezinqubo ezihluke kakhulu emisebenzini yabantu. Njengakwezinye izinkampani eziningi, inezici zayo ezithinta inhlangano, abaphathi, ukuhamba komsebenzi nokuqeqeshwa kwabasebenzi. Izinhlelo zokuphathwa kobuhle obungaphephile (ikakhulukazi izinhlelo zokuphathwa kwesitudiyo, abanye abazama ukuzilanda mahhala kwi-Intanethi) zivame ukudala ukwehluleka, futhi ukuntuleka kokusekelwa kobuchwepheshe obusezingeni kuholela ekulahlekelweni kwedatha eqoqiwe yafakwa. Ngokuzayo, lokhu kubanga ukungabi nesikhathi kwabasebenzi ukwenza ukulawulwa kwekhwalithi ye-salon, kanye nokuphathwa, okokusebenza nokubalwa kwezimali, ukuphathwa kwabasebenzi kanye nokuqeqeshwa endaweni yezobuhle, njll. Isixazululo esihle kakhulu nethuluzi lokwandisa umsebenzi we inkampani yakho kulokhu kuzoba yimishini yokuphathwa kobuhle bendawo. Uma inkampani yakho inentshisekelo yokuhlela uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ephezulu (ikakhulukazi, uhlelo lokuphathwa kwabasebenzi nokulawulwa koqeqesho lwabo), akunakulandwa mahhala kwi-Intanethi. Umkhiqizo omuhle kakhulu wesoftware okwazi ukubhekana nalo msebenzi wuhlelo lokuphathwa kobuhle be-USU-Soft, okusiza ukuthi usebenzise ukuzenzakalela kwempahla, ukubalwa kwezimali, abasebenzi kanye nokuphathwa kwezimali e-beauty salon, futhi ngaphezu kwalokho, ukugcina ngesikhathi esifanele futhi ukulawula ikhwalithi phezu kwesalon yobuhle, kusetshenziswa imininingwane etholwe ngesikhathi kufakwa uhlelo lwethu. Uhlelo lokuphathwa kobuhle be-USU-Soft lungenziwa ngezifiso futhi lusetshenziswe ngempumelelo yizinkampani ezahlukahlukene embonini yezobuhle: i-beauty salon, i-beauty studio, i-nail salon, isikhungo se-spa, ne-solarium, i-massage salon, njll. I-USU-Soft njenge Uhlelo lokuphathwa kobuhle lukhombise ukuthi luhamba phambili eKazakhstan nakwamanye amazwe e-CIS. Umehluko omkhulu phakathi kohlelo lokuphatha lwe-USU-Soft nemikhiqizo efanayo yesoftware kulula kwayo nokusebenziseka kalula. Umsebenzi ukuvumela ukuba uhlaziye lonke ulwazi oluhlobene nomsebenzi we-salon yakho luhle kakhulu.
I-USU-Soft njengohlelo lwe-beauty salon ilula ngokulinganayo kumqondisi, umphathi, umphathi we-salon, kanye nomsebenzi omusha oqeqeshwa. Ukuzenzekelayo kokuphathwa kohlelo kuvumela ukuhlaziya isimo semakethe, kuhlolwe amathemba entuthuko yenkampani. Zonke izinhlobo zemibiko zenzelwe ukusiza umphathi ukwenza lokhu. Isoftware yokuphathwa kobuhle iyoba umsizi obalulekile kumphathi wezobuhle ekulawuleni i-salon yobuhle, njengoba inikezela ngemininingwane ebonakalayo yokwenza izinqumo zokuphatha ezilinganiselayo (ngokwesibonelo, ukufaka indawo yangaphakathi, ukwethula uhla olusha lwezinsizakalo, ukuqeqesha abasebenzi , njll.) ngesikhathi esifishane. Ngamanye amagama, uhlelo lokuzenzakalela kanye nokuphathwa kwesalon yobuhle kusiza ukusheshisa ukucubungula, kanye nokufakwa nokukhishwa kolwazi. Uhlelo lokuphatha luphinde lusize ekuhlaziyeni umsebenzi we-beauty salon, okhulula isikhathi sabasebenzi bakho ukuxazulula ezinye izinkinga (ukuqeqeshelwa ukuphatha uhlobo olusha lomsebenzi ukuqhubeka nokusebenzisa la makhono futhi ngenxa yalokho, ukwandisa ukuncintisana inkampani yakho). Uma unesitolo e-beauty salon yakho, uzothola izici eziningi eziwusizo emsebenzini wakho. Imodyuli yokuphatha ozoyisebenzisa kaningi yi-'Sales '. Uma ufaka le module, ubona iwindi lokusesha idatha. Lapho kunokuningi okufakiwe, ungacwenga izindlela zakho zokucinga ukuze wenze ngcono umsebenzi wakho. Inkambu ethi 'Thengisa Usuku kusuka' izobonisa konke ukuthengisa okuqala kusukela ngosuku oluthile. Ukuze ukwenze, chofoza umcibisholo ekhoneni elingakwesokudla kwenkambu engenalutho. Ewindini elivelayo, ungakhetha unyaka, inyanga, usuku noma usethe usuku lwamanje ngasikhathi sinye usebenzisa umsebenzi we-'Namuhla '. Inkambu 'Yosuku lokuthengisa kuya' ikuvumela ukuthi ubonise konke ukuthengisa kudethi ethile. Inkambu ye-'Klayenti 'inikeza usesho lomuntu othile. Ukuze ukhethe iklayenti elithile, kufanele uchofoze kuphawu olunamachashazi amathathu ekhoneni elingakwesokudla lenkambu. Ngemuva kwalokho, uhlelo lokuphatha luvula ngokuzenzakalela uhlu lwe-database yamakhasimende. Ngemuva kokukhetha iklayenti elidingekayo, chofoza inkinobho ethi 'Khetha'. Ngemuva kwalokho, uhlelo lokusebenza lokuphatha lubuyela ngokuzenzakalela ewindini langaphambilini lokusesha. Isisebenzi esenza ukuthengisa sikhonjisiwe emkhakheni we-'Thengisa '. Lesi sisebenzi singakhethwa ohlwini lwabasebenzi ku-database. Inkambu ethi 'Ebhalisiwe' isetshenziselwa ukusesha ngabasebenzi ababhalise ukuthengisa kwisoftware.
Yini ebaluleke kakhulu kunoma yiliphi ibhizinisi elihlinzeka ngezinsizakalo? Abaningi bazothi indlela ethembekile yokuphatha, impumelelo emncintiswaneni emakethe, ikhono lokuheha amakhasimende. Ngokungangabazeki, idlala indima ebalulekile. Kepha noma kunjalo, into ebaluleke kakhulu amaklayenti nochwepheshe abahle. Lezi yizinto ezimbili, ngaphandle kwazo okungenakwenzeka ukuba khona kwe-salon yobuhle. Kuyadingeka ukuheha amaklayenti amaningi ngangokunokwenzeka, usebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokukhangisa, izinhlelo zebhonasi, izaphulelo nokwenyusa. Uhlelo lwethu lokuphathwa kobuhle luzokusiza kulokhu, njengoba lunokusebenza okuhle. Uhlelo lokuphatha lwakha inani elikhulu lemibiko. Uzobona ukuthi yikuphi ukukhangisa okusebenzayo nokuheha amakhasimende nokuthi yini okungasebenzi, ukuze ungasebenzisi imali ngeze nokuyiqondisa kulokho okudingwa yibhizinisi lakho. Noma kunombiko okhombisa izizathu eziyinhloko zokuthi kungani amakhasimende eshiya i-beauty salon yakho. Uzoqonda ukuthi kungani lokhu kwenzeka, futhi ngokuzayo wenza konke okusemandleni ukukuvimbela. Kubalulekile hhayi ukuheha amakhasimende kuphela, kepha futhi nokugcina amaklayenti amadala. Uma bephenduka izivakashi ze-VIP, baba umthombo othembekile wezimali futhi baletha inzuzo ezinzile. Kubalulekile ukukhuthaza amakhasimende anjalo ukuthi aqhubeke nokuba izivakashi zakho ezijwayelekile.
accounting salon wezinwele
accounting for salon
izingodo ze-accounting zezinhle zobuhle
Ukubalwa kwamakhasimende salon
accounting of the izinto salon
ukubalwa kwezinto ezisetshenziselwa izinwele zezinwele
I-Barber shop automation
Ukuphathwa kwesitolo se-Barber
Uhlelo lokusebenza lwe-salon
Uhlelo lokulawulwa kwe-salon
Uhlelo lwekhompyutha lwe-salon
Ukulawulwa kwesitolo sezinwele
I-CRM yesitolo sezinwele
CRM for salon
Ukuphathwa izinwele salon
Okufakiwe kwamakhasimende kwamakhasimende ku-salon
Uhlelo lomsebenzi we-salon
Uhlelo lwensimbi yokulungisa izinwele
Uhlelo lwe-barberhop accounting
Uhlelo lokulawula isitolo sezinwele
Uhlelo lwe-salon accounting
Uhlelo lokuphathwa kwe-salon
Uhlelo lwe studio lobuhle
Uhlelo kwamakhasimende accounting of salon
Uhlelo lokulawula i-salon
Uhlelo lwabasebenza izinwele
Uhlelo lokuqopha amaklayenti we-salon ubuhle
Uhlelo lokuqopha kwi-salon
Uhlelo lwesikhungo se-SPA
Uhlelo lwe-SPA salon
Amarekhodi ikhasimende salon
Uhlelo olula salon
Uhlelo for salon